नर्भिकमा शनिबार निःशुल्क ओपीडी सेवा – OnlinePahar
२८ माघ २०७७, बुधबार १४:२४ Basanta Khanal	0 Comments	norvic hospital
काठमाडौँ – नर्भिक इन्टरनेशनल हस्पिटलमा शनिबार कन्सलट्यान्ट फिजिसियन तथा कार्डियोलोजिष्टको निःशुल्क सेवा सञ्चालन हुने भएको छ। निःशुल्क ओपीडी अभियान सञ्चालन गर्दै आएको नर्भिकले शनिबार अस्पतालमा कार्यरत कन्सलट्यान्ट फिजिसियन तथा कार्डियोलोजिष्ट डा. शैलेन्द्रप्रसाद कुशवाहाको निःशुल्क ओपीडी सेवा हुने जनाएको हो। अस्पतालका अनुसार डा. कुशवाहाले बिहान १० देखि १२ बजेसम्म बिरामीहरुका लागि निःशुल्क सेवा दिनेछन्। मुटुसँग सम्बन्धित समस्या भएका र अन्य शारीरिक अस्वस्थता भएकाहरुले समेत डा. कुशवाहाको निःशुल्क ओपीडी सेवाबाट लाभान्वित हुन सक्नेछन्। नर्भिकले केही महिनादेखि आफ्नो कर्पोरेट सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी (सीएसआर) अन्तर्गत प्रत्येक शनिबार कुनै न कुनै विशेषज्ञ चिकित्सकलाई फ्री ओपीडी सेवाका लागि प्रस्तुत गर्दै आएको छ। निःशुल्क ओपीडी सेवा लिनका लागि अस्पतालको कल सेन्टर नम्बर ०१५९७००३२ तथा एक्सटेन्सन नम्बर १०१८ मा समेत फोन गरेर आफ्नो नाम टिपाउन सकिने नर्भिकले जनाएको छ।
यो पनि पढ्नुहोस्: जब हामी वजन कम गर्ने अभियानमा लाग्छौं, त्यसको लागि प्रोटिन पहिलो शर्त हो । जसलाई हामीले आफ्नो आहारमा समावेश गर्ने गर्छौं । प्रोटिन युक्त खानेकुराको उपभोगले हाम्रो पेट लामो समयसम्म भरी रहन्छ । प्रोटिनले मांसपेशीहरूको निर्माणमा मद्दत पनि गर्छ । गहिरो कसरतले सेल मर्मत र रिकभरीलाई बढावा दिन्छ । प्रोटिनलाई सूक्ष्म पोषक तत्व पनि मानिन्छ । तर यदि तपाईं बिनासोच त्यस्ता खानेकुरा उपभोग गर्न थाल्नुहुन्छ भने त्यो स्वास्थ्यको लागि हानिकारक हुन सक्छ । प्रोटिन केवल हाम्रो तौल घटाउन र शरीर निर्माणका लागि लाभदायक छैन । यसले मान्छेको छाला र कपाललाई चमकदार बनाउने र हड्डीलाई बलियो बनाउन पनि सहयोग गर्छ । साँच्चै भन्नुपर्दा, प्रोटिन युक्त खाद्य पदार्थले मान्छेको शरीर निर्माणमा ब्लकको रूपमा काम गर्छ । त्यसैले सबैले प्रत्येक खानासँग प्रोटिनको न्यूनतम मात्रा लिनुपर्छ । धेरै मान्‍छेलाई सही मात्राको बारेमा थाहा छैन, जसले स्वास्थ्यमा साइड इफेक्ट गरिरहेको हुन्छ ।
कार्बोहाइड्रेड बिनाको प्रोटिन स्वास्थ्यका लागि खतरनाक छ : चिकित्सकहरू आजका युवा पुस्ता भ्रामक अत्यधिक मात्रामा प्रोटिनको उपभोगमा व्यस्त रहेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्छन् । उनीहरूको भ्रमले मानसिक स्वास्थ्य, मुटु र श्वासप्रश्वास प्रणालीमा असर गर्न सक्ने चिकित्सकहरू बताउँछन् । मस्तिष्क, मांसपेशीहरू, शरीरको प्रतिरक्षा प्रणाली, मुटुको स्वास्थ्य आदिमा यसले नकारात्मक प्रभाव पार्छ । तपाईंको लागि कति प्रोटिन आवश्यक छ ? तपाईंको शरीरको एक किलो बराबर एक ग्राम प्रोटिन आवश्यक हुन्छ । यदि तपाईंले एक किलो बराबर एक ग्रामभन्दा धेरै प्रोटिन लिनुभयो भने त्यसको साथमा सोही अनुपातमा कार्बोहाइड्रेडको मात्रा मिलाउनु पर्छ । अन्यथा यो पोषक तत्व नै हाम्रो शरीरमा विष बन्न सक्ने चिकित्सकहरू बताउँछन् । कार्बोहाइड्रेट र बोसो बिना प्रोटिनको अत्यधिक खपत पनि हानिकारक छ।
निर्जलीकरण: प्रोटिनले हाम्रो मिर्गौलामा अत्यधिक मात्रामा नकारात्मक असर गर्न सक्छ । सन्तुलन नमिलाउँदा यसले सम्पूर्ण स्वास्थ्यमा असर पार्छ । साथै, यसको धेरै उपभोग गर्दा हाम्रो शरीरमा निर्जलीकरणको समस्या पनि देख्न सकिन्छ । यसकारण स्वास्थ्य विशेषज्ञहरू पर्याप्त पानी र खनिजका लागि तरकारी र फलहरूको उपभोग बढाउन सुझाव दिन्छन् । अवसाद: महिलाहरु जो अधिक प्रोटीन र कम कार्बोहाइड्रेटको उपभोग गर्छन् । उनीहरूमा मानसिक समस्याहरु जस्तै अवसाद, चिन्ता, मुड स्विंग, नकारात्मक भावनाको विकास हुने जस्ता समस्या देखिन सक्छन् । तौल बढ्नु: प्रोटिनको अत्यधिक मात्राले तपाईंको पेटको सन्तुलनमा अवरोध सिर्जना गर्न सक्छ । अनावश्यक तौल बढ्ने लगायतका समस्यामा यसले भूमिका खेल्छ । साथै, कार्बोहाइड्रेटबिना प्रोटिन उपभोग गर्दा सासको दुर्गन्ध हुन सक्छ । यो कारण हो कि विशेषज्ञहरु स्वस्थ पोषणका लागि प्रोटिनसँग कार्बोहाइड्रेटको पर्याप्त मात्रामा उपभोग गर्न सुझाव दिन्छन्।
← न्यादी हाइड्रोपावरको आइपीओ बाँडफाँट, यसरी हेर्नुहोस् रिजल्ट
पाथिभरा माताले हामीसबैको रक्षा गरुन, ०६ कार्तिक २०७८ शनिवारको राशिफल पढौं →